Salama mpilalao PubG, eto izahay ankehitriny miaraka amin'ny fitaovana mahagaga ahafahanao mijirika PUBG vanim-potoana 13. Izy io dia hanome anao ireo hacks mahagaga indrindra ahafahanao mandresy amin'ny ady rehetra. Antsoina hoe Venum PUBG izy io.
Ny hack Venum dia natao manokana hika ny fanavaozana farany ny PubG. Misy fitaovana Android hafa koa, izay manome endrika mitovy amin'izany ihany koa. Saingy taorian'ny fanavaozana dia tsy mandeha ireo fitaovana rehetra ireo. Ka eto izahay miaraka amin'ity fitaovana ity.
Izy io dia manolotra anao fitaka maro, izay tsy misy antony tsy ahafahanao mandresy. Afaka milalao irery ianao ary maka ekipa fahavalo maro. Hifanakalozy hevitra amin'ny antsipiriany ny endri-javatra rehetra misy izahay, ka mijanòna aminay.
Topimaso momba ny Venum PUBG
Izy io dia fitaovana Android Hacking ho an'ny PubG, izay novolavolain'ny antoko fahatelo. Izy io dia fitaovana maimaim-poana izay manolotra endri-javatra maro, fa alohan'ny hanombohantsika azy dia andao hojerentsika ny PubG. PubG dia fampiharana lalao Android, izay novolavolain'i Krafton. Sahan'ady an-tserasera Multiplayer izy io.
Misy mpilalao 100 isaky ny kianja. Azonao atao ny milalao ekipa misy mpilalao efatra ao anatin'izany. Ka fahavalo avokoa ireo mpilalao 96 rehetra. Tsy maintsy mamono azy ireo ianao alohan'ny ataony, mitady fitaovam-piadiana, ammo, ary fananana velona hafa.
Noho izany dia manome anao fomba mora handresena izahay, amin'ny fampiasana ny Apk hack hack Venum. Manolotra anao fomba isan-karazany ahafahanao misoloky rehefa milalao. Hizara ny safidy rehetra eto ambany izahay.
The Injector manolotra anao mandrara ny fitaka maimaim-poana. Matetika, raha mampiasa hack ianao amin'ny lalao rehetra dia fandrarana ny hetsika tsy ara-dalàna ny kaontinao. Saingy manome anao ny fiarovana amin'ny fandrarana izay ahafahanao misoloky soa aman-tsara.
Izany dia dingana iray, rehefa mitifitra olona na zavatra ianao, dia miakatra miakatra ny tanjona fa mampiasa io fitaovana io. Azonao atao izany ary mitifitra amin'ny toerana iray imbetsaka.
Amin'ny fampiasana an'io safidy io dia ho afaka hahita ny toerana misy ny mpilalao hafa ianao. Izy io dia mampiseho anao antenne iray eo amin'ny lohany, izay miakatra ambony. Noho izany, afaka mahita mpilalao manodidina ianao.
Izy io dia manolotra anao hitifitra fahavalo marina. Tsy mila manatontosa ny fahaizana mitifitra ianao fa mikendry sy mitifitra fotsiny.
Ireto ny sasany amin'ireo serivisy lehibe an'ity fitaovana ity. Afaka mahita bebe kokoa toa ireto ianao, andramo ny tenanao.
Anaran'ny fonosana com.Riven.King.EN
Developer RIVEN KING
Endri-javatra manan-danja amin'ny Venum PUBG
Betsaka ny endri-javatra mahavariana, fa hizara ny sasany amin'ireo fiasa izay hitako mahaliana kokoa momba ity fitaovana ity. Azonao atao koa ny mizara ny zavatra niainanao aminay amin'ny alàlan'ny fizarana hevitra. Aza misalasala mampiasa azy.
Manantena aho fa tianao ity fampiharana Android ity. Manana fampiharana mitovy amin'izany koa izahay etsy ambany.
Walter Black Ho an'ny PUBG
Ahoana ny fomba hametrahana Apk Hack Hack?
Raha vantany vao vita ny Initialization dia mila manokatra azy ianao ary mamela ny alalana rehetra. Aorian'izany dia mila fitaovana hafa fantatra amin'ny hoe 'Andriamatoa Shooter'. Fitaovana virtoaly izy io, tsy maintsy manamboatra firavaka Venum sy PUBG ao ianao. Aorian'izany, sokafy ny hack hack Venum ary aza mifidy faka. raha tsy miorim-paka ny fitaovanao ary ahenao kely. Hiseho eo amin'ny seho ny sary famantarana iray, izay manolotra anao hamelana ireo mpisoloky.
Azo antoka ve ny mampiasa Venum PUBG?
Araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra dia azo antoka ny fampiasana azy. Manonona safidy ho an'ny Anti Ban ihany koa izy ireo, izay tsy mila manahy momba ny fandraràna ny kaonty. Tsy afaka manome antoka anao anefa izahay. Raha vonona ny hampiasa azy ianao dia ampiasao irery.
Ara-dalàna ve ny fampiasana Venum PUBG?
Tsia, tsy ara-dalàna ny fampiasana azy. Mampiasa fitaovana iray manitsakitsaka tanteraka ny lalàn'ity lalao ity ianao. Noho izany tsy ara-dalàna ny fampiasana azy. Azonao atao ny mamoy ny kaontinao amin'ny fampiasanao azy. Tsy mampiroborobo ity fitaovana ity izahay.
Ahoana ny fampidinana ny Apk Hack Hack?
Fampiharana tsy ara-dalàna izy io, noho izany dia tsy hita ao amin'ny Google Play Store na tranokala hafa. Saingy manome anao rohy azo antoka sy miasa amin'ity Hack Apk ity izahay. Mila manindry an'io rohy io fotsiny ianao ary miandry segondra vitsy mandra-pahavitan'ny fampidinana.
Ahoana ny fametrahana Apk Hack Hack?
Mba hametrahana azy amin'ny fitaovana na fitaovana dia mila mamela fikirana vitsivitsy ianao. Izahay dia mizara ny dingana fametrahana, araho fotsiny izy ireo dia ho azonao atao ny mametraka azy tsara.
Mandehana any amin'ny File Manager ary misokatra fampidinana
Kitiho ny rakitra Apk ary safidio ny Safidy fametrahana.
Andraso segondra vitsy mandra-pahatanterany
Venum PUBG Apk no fitaovana Android tsara indrindra amin'ny fijinjana ny Pubg vanim-potoana 13. Manolotra fomba maro hamitahana izy io fa misy ny loza ateraky ny fandraràna ny kaonty. Noho izany, mieritreritra alohan'ny fampiasana.
Sokajy Games, Tools Tags Injector, Hack Hack, PUBG Venum, Venum PUBG Apk Post Fikarohana
EHTERAZ Apk Download ho an'ny Android [2022 Update]